192.168.8.1 - Ilaali Shabakadaada WiFi
Ilaali Shabakadaada WiFi waa lama huraan inta laga hadlayo kahortaga soo duulayaasha & ilaalinta xogtaada.
Sida loo ilaaliyo shabakadaada Wi-Fi
Ku Ilaali shabakadaada Wi-Fi wuxuu ka ilaaliyaa kuwa wax jabsada, waxaa jira talaabooyin badan oo ay tahay inaad qaado:
1. Beddela magaca isticmaalaha & passkey-ga caadiga ah
Waxa ugu horeeya uguna muhiimsan ee ay tahay inaad sameyso si aad u ilaaliso naftaada WiFi Shabakadu waa inay bedesho usernames-ka caadiga ah & furayaasha sirta ah wax ilaalin dheeri ah.
Alaab-qeybiyeyaasha Wi-Fi waxay si otomaatig ah ugu qoondeeyaan username iyo passkey shabakadda & kuwa wax jabsada waxay si fudud ku heli karaan baaskeygan caadiga ah ee internetka. Haddii ay marin u helaan shabakadda, waxaa laga yaabaa inay wax ka beddelaan baaskiilka wax kasta oo ay doonayaan, ka xiraan iibiyaha oo la wareegaan shabakadda.
Bedelida magacyada adeegsadayaasha & furaha sirta ah waxay kadhigeysaa mid dhib badan ku ah soo duulayaasha si ay u helaan cidda uu yahay Wi-Fi & helitaanka shabakada. Hackers waxay leeyihiin aalado tiknoolajiyad sare ah si ay u tijaabiyaan boqolaal kooxood oo passkey & username suurto gal ah, sidaa darteed waxaa muhiim ah in la doorto eray sir ah oo awood badan kaas oo isku daraya astaamo, xarfo, iyo lambarro, si looga dhigo mid adag in la caddeeyo.
2. Ka daar Shabakad sir-gelinta wireless-ka
Qarsoodi waa mid ka mid ah hababka ugu hufan ee lagu ilaaliyo xogta shabakaddaada. Qarsoodi ayaa ku shaqeysa isku darka xogtaada ama fariinta ku jirta si aysan u cadeyn karin haakarisku.
3. Adeegsiga Shabakad Gaar loo Leeyahay (Virtual Network Network) VPN
Shabakad Gaar loo Leeyahay (Virtual Network Network) waa shebekad kuu oggolaaneysa inaad si shaqsiyadeed ugu xirmaan shabakad aan qarsoodi ahayn, oo aan la hubin. VPN ayaa qarinaya xogtaada si uusan jabiyaha ugu gudbin karin waxa aad ka sameyso khadka tooska ah ama meesha aad ku sugan tahay. Desktop-ka ka sokow, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa laptop-ka, taleefanka ama kaniiniga. Sidoo kale desktop, waxaa xitaa laga isticmaali karaa taleefan, laptop, ama kaniiniga.
4. Demi Shabakada Wi-Fi inta aadan guriga joogin
Waxay umuuqataa mid sahlan laakiin mid ka mid ah qaababka ugu fudud ee looga difaaci karo shabakadaha gurigaaga inay weeraraan ayaa ah inaad damiso markii aad ka maqantahay guriga. Shabakadaada Wi-Fi uma baahna inay shaqeyso 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii. Deminta Wi-Fi-gaaga inta aad ka maqantahay guriga waxay hoos u dhigeysaa suurtagalnimada qatarta wax ku xeel dheer ee isku dayaya inay soo galaan shabakadaada inta aad ka maqantahay guriga.
5. Cusboonaysii barnaamijka router-ka
Barnaamijka Wi-Fi waa in la casriyeeyaa si loo ilaaliyo amniga shabakadda. Shirkadaha router-ka sida nooc kasta oo kale oo ka mid ah softiweerrada waxaa ka mid noqon kara bandhigyo ay jabsadayaashu u daneynayaan inay ka faa'iideystaan. Qaar badan oo ka mid ah router-yada ma lahaan doonaan xulashada otomaatig-cusbooneysiinta sidaa darteed waxaad u baahan doontaa inaad si muuqata u cusbooneysiiso softiweerka si aad u hubiso in shabakaddaadu ammaan tahay
6. Isticmaal Firewalls
Ruter-yada ugu badan ee W-Fi waxay ka kooban yihiin gidaar-dhisme shabakad-dhex-dhexaad ah kaas oo ilaalin doona shabakadaha isgaarsiinta ballaadhan & hubin doona wax kasta oo weerarro shabakadeed ah oo ka yimaada iibiyaasha Xitaa waxay lahaan doonaan ikhtiyaar in la joojiyo sidaa darteed waa muhiim in la baaro in firewall-ka router-kaaga uu shidan yahay si loogu daro lakabka ilaalinta ee lagu daro amnigaaga.
7. Oggolaanshaha Shaandhaynta MAC Cinwaanka
Inta badan router-yada ballaadhan waxaa ka mid ah aqoonsi gaar ah oo loo yaqaan cinwaanka Cinwaanka Maareynta Maareynta Warbaahinta (MAC). Tani waxay dooneysaa inay xoojiso amniga iyadoo la hubinayo tirada qalabka ee ku xirnaan kara shabakadaha.